Certificat & haja
BS Dingana tokana
DIN Rail Single dingana
BS Telo Dingana
Fotodrafitrasa mandroso tsara (AMI)
N + Solika
Fampandrosoana & famatsiam-bola tetikasa
Fitantanana ny EPC
Vahaolana N + rehetra-tokana
Famokarana angovo fahombiazan'ny angovo
Famandrihana arak'asa fahaiza-manao mahomby amin'ny Afovoany Atsinanana
Zavamaniry Blue Linyang any Chine
Fampidinana serivisy fitaterana angovo an'ny Zhangshi Highway
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Fampahalalana matotra Keypad Smart Faha-telo takila miendrika takelaka LY-SM350
Meter tsy mihetsika amin'ny lafiny ankolaka Smart (Fandidiana CTVT) LY -...
Meter tsy mihetsika amin'ny sehatry ny dingana telo (Smart Operated Meter) (CT miasa) LY-SM ...
Metatera mialoha mialoha an'ny keypad tokana LY-SM150
Métera Dingana tokana miaraka amin'ny fandrefesana Bi-Directional LY-BM12
Metatra LY-BM12 dia lafo haingam-pandeha lafo vidy, azo ampiharina amin'ny mpanjifan'ny trano fonenana sy tetikasa sub-metering. Izy ireo dia marina sy voaro tsara amin'ny fiadiana amin'ny fikorontanana, mety amin'ny famoriam-bola mora sy vahaolana fiarovana.
Mirefy LY-BM12 dia miorina miorina amin'ny rafitra mora ampiasaina izay manolotra safidy marobe mifanaraka amin'ny tsena sy mpanjifa.
Dingana ANASA Meter LY-ANSI11
Ny andiany LY-AS dia herinaratra herinaratra miorina amin'ny herinaratra izay manome lanja sy fahatokisana azy.
Ny metaly andiany LY-AS dia narafitra tanteraka tamin'ny fenitra ANSI, ary misy seranan-tserasera serasera fananganana RS485 namboarina hanohanana ny fampiharana AMR.
Tontolon-tsivana Miady amin'ny rano tsy miovaova LY-BM13
Metatra LY-BM13 dia lafo haingam-pandeha lafo vidy, azo ampiharina amin'ny mpanjifan'ny trano fonenana sy tetikasa sub-metering. Izy ireo dia marina sy voaro tsara amin'ny fiadiana amin'ny fikorontanana, mety amin'ny famoriam-bola mora sy vahaolana fiarovana.
Mirefy LY-BM13 dia miorina miorina amin'ny rafitra mora ampiasaina izay manome safidy marobe mifanaraka amin'ny tsena sy mpanjifa.
BS Keypad Meta Prepaid Meter LY-KP12B
Ny metatra LY-KP12B dia vatan'ny herinaratra efa nomanina ho an'ny zana-kaody mahazatra miaraka amin'ny BS mampiditra sy / na fisafidianana karazana fisarahana, manome fitaovana avo lenta marina sy azo ianteherana, ahafahan'ny fifandraisana fifandraisana tokana.
Ny metatra LY-KP12B dia namboarina mifototra amin'ny Token 20-bit mifanaraka amin'ny famaritana STS, mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra IEC ary voamarina miaraka amin'ny fanamarinana STS sy SABS. Ny fiasan'izy ireo miady amin'ny fanaingoana sy fiomanana dia mahatonga azy ireo fitaovana mora vidy ho an'ny famoriam-bola sy ny vahaolana ho fiarovana.
Métera tokan-tena tokana miaraka amin'ny famandrihana angovo mavitrika LY-BM11
Metatra LY-BM11 dia lafo haingam-pandeha lafo vidy, azo ampiharina amin'ny mpanjifan'ny trano fonenana sy tetikasa sub-metering. Izy io dia voaaro tsara sy voaro tsara amin'ny fiasa miaro, mety amin'ny famoriam-bola mora sy vahaolana fiarovana.
Mirefy LY-BM11 dia miorina miorina amin'ny rafitra mora ampiasaina izay manolotra safidy marobe mifanaraka amin'ny tsena sy mpanjifa.
Faritra: No. 666 Lalana Linyang, Qidong, Jiangsu Province 226299, Sina
Foiben'ny: 18F, tranobe 1, Zhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, Sina
© Copyright - 2010-2020: Zo rehetra voatokana. Soso-kevitra - Hot Products - Sitemap
Single Dingana Smart Meter Energy , Single dingana Meter , Single dingana voaloa vola mialoha Meter , Single Dingana voaloa vola mialoha angovo Meter , Single dingana Tou Meter , Single dingana Electric Meter .
Raha mila fanazavana fanampiny
Raha te hahazo ny vaovao farany ianao, azafady mameno ny taratasy eto ambany.
Mba fenoy ny saha notakiana.